Trump ကို ဘယျနိုငျငံတှကေ ပွနျနိုငျစခေငျြသလဲ….ဘယျနိုငျငံတှကေ ပွနျမနိုငျစခေငျြဘူးလဲ – Pyit Time Htaung
တရုတျပွညျ ရဲ့ခွိမျးခွောကျမှုရှိေ နတာကွောငျ့ Trump ကိုကြိနျးသပွေနျ နိုငျစခေငျြပါတယျ။ ထိုငျဝမျနဲ့တရုတျသမိုငျးကွော ငျးကိုထညျ့မပွောပါ။ လကျရှိနိုငျစခြေ ငျမှုအကွောငျးရငျကိုသာထော ကျပွပါတယျ။
ဘရာဇီး သမ်မတဟာ တရုတျကို မလိုလားသူပါ။ တရုတျဆီက ကာကှယျဆေးဝယျယူရနျ အစီအစဉျကို ပယျခပြဈခဲ့သူပါ။ ထရမျ့ကလညျး ဘရာဇီးကိုကူဖို့ ကတိကဝတျတှပေေးထားပါတယျ။ အမဇေုံတောမီးလောငျတဲ့ ကိစ်စမှာတောငျ ဘရာဇီးသမ်မတ ဘကျက Trump ကရပျခဲ့တာပါ။ Trump ရဲ့ “America First” ကိုနမူနာယူပွီး “Brazil above all.” slogan ကိုယူထားတာပါ။
တရုတျရဲ့နယျစပျပွဿနာတှေ၊ ဒသေတှငျးတငျးမာမှုတှကွေောငျ့ အိန်ဒိယဝနျကွီးခြုပျက Trump ကိုလိုလားပါတယျ။ Covid စကာစမှာတောငျ Trump က အိန်ဒိယကိုသှားလညျထားတာပါ။ Obama လကျထကျက မိုဒီကိုဝဖေနျထားတာတှရှေိပါတယျ။ Bush တုနျးကလညျး မိုဒီကို ဗီဇာငွငျးပယျတဲ့အထိဖွဈဖူးပါတယျ။ Trump နဲ့ကအဆငျပွပေါတယျ။
Obama လကျထကျက ဖိလဈပိုငျသမ်မတဒုတာတေးရဲ့ မူးယဈဆေးဝါးနှိမျနှငျးမှုမှာ ခပျကွမျးကွမျးကိုငျခဲ့လို့ ဆကျဆံရေးပကျြပွားခဲ့ပါတယျ။ Trump လကျထကျမှာ Obama ထကျအဆငျပွပေါတယျ။
Trump နဲ့ ဟနျဂရေီဝနျကွီးခြုပျနဲ့ အငျမတနျကောငျးမှနျတဲ့ဆကျဆံရေးရှိပါတယျ။ သူကလညျး Trump လို လကျယာဆနျပွီး ခပျကွမျးကွမျးအုပျခြုပျသူမို့ အမတခေငျြးအလှမျးသငျ့ပါတယျ။
ဟောငျကောငျ နိုငျငံသားတှကေ Trump ကိုလိုလားပါတယျ။ တရုတျရဲ့ဒီမိုကရေ စီအရေး ဖိနှိပျမှုကို တှနျးလှနျခငျြလို့ပါ။
ဗီယကျနမျဟာတရုတျပွညျကိုလုံးဝအယုံအကွညျမရှိတဲ့အတှကျ တရုတျကိုခပျကွမျးကွမျးကိုငျမယျ့ Trump ကိုလိုလားပါတယျ။ တောငျတရုတျပငျလယျ ထဲက တရုတျ ရဲ့ခွိမျးခွောကျမှုလညျး ပါပါတယျ။
ဂပြနျကိုယျတိုငျ တရုတျရဲ့ဒသေတှငျးဗိုလျကစြိုးမိုးခငျြမှုကိုမလိုလားတဲ့အတှကျ Trump ကိုလိုလားပါတယျ။
တရုတျပွညျက ကုနျသှယျမှုစဈပှဲကိစ်စနဲ့ Trump ကိုမလိုလားပါ။ ဒသေအတှငျးပွဿနာတှမှော အမရေိကနျပါဝငျနမှေုကွောငျ့လညျးပါပါတယျ။
အီရနျကလညျး Trump နဲ့လုံးဝမတညျ့ပါ။ နိုငျငံအသီးသီးက Trump အပျေါလိုလားခွငျးမလိုလားခွငျးဟာ ကိုယျ့နိုငျငံအကြိုးစီးပှားပျေါမှာ လိုအပျခကျြအလိုကျမူတညျပါတယျ။
မွနျမာပွညျ အတှကျတော့ Trump နိုငျခွငျးမနိုငျခွငျးက တိုကျရိုကျအမြားကွီး အကြိုးသကျရောကျလိမျ့မယျလို့ မထငျပါ။ တရုတျနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ သှယျဝိုကျပွီး အကြိုးသကျရောကျမှုရှိနိုငျ ပါတယျ။
အမရေိကနျပွညျတှငျးမှာတောငျ Trump ကို ကွိုကျမကွိုကျနှဈခွမျးကှဲသေးတာပဲမလား? Trump အပျေါကွိုကျမကွိုကျဆိုတာ လူတှရေဲ့ တရုတျပွညျအပျေါအမွငျ၊ ကုနျသှယျမှုစဈပှဲပျေါ အမွငျတှပေျေါ မူတညျပွီး ကှဲပွားကွပါကွောငျး။
Richard Myo Thant 4-November-2020
တရုတ်ပြည် ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုရှိေ နတာကြောင့် Trump ကိုကျိန်းသေပြန် နိုင်စေချင်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်သမိုင်းကြော င်းကိုထည့်မပြောပါ။ လက်ရှိနိုင်စေချ င်မှုအကြောင်းရင်ကိုသာထော က်ပြပါတယ်။
ဘရာဇီး သမ္မတဟာ တရုတ်ကို မလိုလားသူပါ။ တရုတ်ဆီက ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် အစီအစဉ်ကို ပယ်ချပစ်ခဲ့သူပါ။ ထရမ့်ကလည်း ဘရာဇီးကိုကူဖို့ ကတိကဝတ်တွေပေးထားပါတယ်။ အမေဇုံတောမီးလောင်တဲ့ ကိစ္စမှာတောင် ဘရာဇီးသမ္မတ ဘက်က Trump ကရပ်ခဲ့တာပါ။ Trump ရဲ့ “America First” ကိုနမူနာယူပြီး “Brazil above all.” slogan ကိုယူထားတာပါ။
တရုတ်ရဲ့နယ်စပ်ပြဿနာတွေ၊ ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကြောင့် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်က Trump ကိုလိုလားပါတယ်။ Covid စကာစမှာတောင် Trump က အိန္ဒိယကိုသွားလည်ထားတာပါ။ Obama လက်ထက်က မိုဒီကိုဝေဖန်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ Bush တုန်းကလည်း မိုဒီကို ဗီဇာငြင်းပယ်တဲ့အထိဖြစ်ဖူးပါတယ်။ Trump နဲ့ကအဆင်ပြေပါတယ်။
Obama လက်ထက်က ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒုတာတေးရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နှင်းမှုမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းကိုင်ခဲ့လို့ ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားခဲ့ပါတယ်။ Trump လက်ထက်မှာ Obama ထက်အဆင်ပြေပါတယ်။
Trump နဲ့ ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ သူကလည်း Trump လို လက်ယာဆန်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းအုပ်ချုပ်သူမို့ အမတေချင်းအလွမ်းသင့်ပါတယ်။
​ဟောင်ကောင် နိုင်ငံသားတွေက Trump ကိုလိုလားပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ဒီမိုကရေ စီအရေး ဖိနှိပ်မှုကို တွန်းလှန်ချင်လို့ပါ။
ဗီယက်နမ်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုလုံးဝအယုံအကြည်မရှိတဲ့အတွက် တရုတ်ကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းကိုင်မယ့် Trump ကိုလိုလားပါတယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ် ထဲက တရုတ် ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုလည်း ပါပါတယ်။
ဂျပန်ကိုယ်တိုင် တရုတ်ရဲ့ဒေသတွင်းဗိုလ်ကျစိုးမိုးချင်မှုကိုမလိုလားတဲ့အတွက် Trump ကိုလိုလားပါတယ်။
တရုတ်ပြည်က ကုန်သွယ်မှုစစ်ပွဲကိစ္စနဲ့ Trump ကိုမလိုလားပါ။ ဒေသအတွင်းပြဿနာတွေမှာ အမေရိကန်ပါဝင်နေမှုကြောင့်လည်းပါပါတယ်။
အီရန်ကလည်း Trump နဲ့လုံးဝမတည့်ပါ။ နိုင်ငံအသီးသီးက Trump အပေါ်လိုလားခြင်းမလိုလားခြင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားပေါ်မှာ လိုအပ်ချက်အလိုက်မူတည်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် အတွက်တော့ Trump နိုင်ခြင်းမနိုင်ခြင်းက တိုက်ရိုက်အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါ။ တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သွယ်ဝိုက်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင် ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာတောင် Trump ကို ကြိုက်မကြိုက်နှစ်ခြမ်းကွဲသေးတာပဲမလား? Trump အပေါ်ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ တရုတ်ပြည်အပေါ်အမြင်၊ ကုန်သွယ်မှုစစ်ပွဲပေါ် အမြင်တွေပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားကြပါကြောင်း။
Posted in World NewsTagged ထိုငျဝမျ, ဖိလဈပိုငျ, ဗီယကျနမျ, ဘရာဇီး, သမ်မတ Trump, ဟနျဂရေီ, ဟောငျကောငျ, အိန်ဒိယ
Previous post မဲရလဒျမြား ရတှေကျရနျ ပွညျနယျအမြားအပွား ကနျြရှိနပေမေယျ့ အနိုငျရရှိကွောငျးကွညောလိုကျတဲ့ ထရမျ့
Next post အန်တတိကတိုကျ က ရခေဲတောငျကွီးတှေ အရညျပြျောသှားခဲ့လြှငျ ကမ်ဘာပျေါက ရအေောကျရောကျသှားနိုငျ တဲ့မွို့တျောမြား